नेपाली केटासंग साउदीकी केटिको माया बसेपछी त्यहि मायाले लियो दुबैको ज्यान दर्दनाक प्रेम कथा
यस शिर्षकको सम्बन्धित भिडियो अन्तिममा राखिएको छ हेर्नुहोला
यो पनि पढ्नुस : म सोच्थेँ बुवा लोभी भएर फाटेको जुत्ता लगाएको होलान् तर होइन रहेछ पैसा कमाउन गार्हो रहेछ म सोच्थेँ बुवा लोभी भएर फाटेको जुत्ता लगाएको होलान् तर होइन रहेछ पैसा कमाउन गार्हो रहेछ, म एकदिन घरमा यस्तो रिसाएँ कि अब ठुलो नभएसम्म कहिले फर्किन्न भनेर घर छाडेर हिँडे । रिसको कारण थियो मेरो बुवाले मलाई एउटा बाइक पनि किन्दिन सकेनन् ।
जाबो एउटा बाइक पनि किन्दिन नसक्नेले मलाई किन डाक्टर बनाउने सपना देख्नु ? आफ्नो सपना किन अरुमाथी थोपार्न खोज्नु ? रिसको झोकमा मैले यो पनि महशुस गरिन कि मैले बुवाको जुत्ता लगाएर हिँडेको रहेछु । मैले केहि पैसाको लागी उहाँको पर्स पनि चोरेर हिंडेको थिएँ । त्यो पर्समा केहि च्यातिएका कागजका टुक्राहरु मेरी आमाले नदेखुन् भनेर एउटा कुनामा लुकाएर राखिएका थिए ।
जब म बस पक्रन बस स्टेसन तर्फ लम्किदैँ थिएँ तब मेरो खुट्टामा केहि बिझाएजस्तो भयो । अलि पर पुगेर जुत्ता खोलेर हेर्दा जुत्ता केहि च्यातिएको थियो र साना साना प्वालहरु पनि थिए । स्टेसनमा कुनै बस नभएकाले मैले त्यहिँ एकछिन बसेर बुवाको पर्स खोलेर हेर्ने निधो गरेँ । पर्समा ४० हजारको बिल रहेछ जुन मलाई बुवाले ल्यापटप किन्नका लागी ॠण लिएका थिए ।
अचम्मको कुरा मैले त्यहाँ बुवाको म्यानेजरले बुवालाई लेखेको एउटा नोटिस भेटेँ जहाँ भनिएको थियो – भोलिदेखी अर्को नयाँ जुत्ता लगाएर अफिस आउनु ।’ अनि मैले सम्झेँ कि जब आमाले बुवालाई नयाँ जुत्ता किन्न भन्थिन् तब बुवा सधैँ भन्थे ‘यो जुत्ता अझ ६ महिनासम्म टिक्छ ।’ अनि मैले अर्को कागज पनि भेटेँ जुन एक्स्चेन्ज लेटेर’ रहेछ । बुवाले मलाई बाइक किन्दिनका लागी आफ्नो स्कूटर नै बेचेका रहेछन् ।
तब म आफुलाई एकदम कमजोर महशुस गरेँ र आफैलाई सम्हाल्नै सकिन्न । आँखाबाट आँशुका धारा रोकिएनन् । अनि हत्तारिएर घर गएँ र बुवालाई अङ्गालो हालेर भनेँ ‘ बुवा, अब मलाई बाइक चाहिँदैन ।’ म सधैँ सोच्थेँ बुवा लोभी भएर फाटेको जुत्ता लगाएको होलान् तर होइन रहेछ पैसा कमाउन गार्हो भएर रहेछ ।